TOP 8 vokatra hatsaran-tarehy ho an'ny fahavaratra | Bezzia
Vokatra hatsaran-tarehy 8 ilaina amin'ity fahavaratra ity
Tonga ihany ny fahavaratra, ny mari-pana tsara dia manasa anao handeha ary mahalala toerana hafa. Ho fialan-tsasatra hafa io, fa tena irina. Miverina any amoron-dranomasina, mandro amin'ny ranomasina, mankafy fisotroana mijery ny filentehan'ny masoandro. Ny fotoan'ny hamafiso ny fikolokoloana ny hoditra manoloana ny fiposahan'ny masoandro. Ankoatr'izay, ny makiazy sy ny ranomanitra dia miova ho an'ny lamba malefaka sy vaovao kokoa ary ny fofona manitra.
Ny sasany amin'ireo vokatra izay mety tsy ho banga amin'ny kitapo fidianao amin'ity fahavaratra ity dia manaraka ireto.
3 ditin-kazo manitra
Misy karazana crème roa izay tena ilaina: Hydrants and of Fiarovana amin'ny masoandro. Raha ny teo aloha, zava-dehibe ny fanohizana ny fahazarana fikarakarana mahazatra. Ohatra, ny isan-karazany ny menaka Shiseido safidy tsara izy ireo. Shiseido mifantoka amin'ny crème mahavelona tarehy azo ampiasaina na andro na alina. Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hamafin'ny hoditra, miady amin'ny kilema ho an'ny hoditra malamalama, tanora ary madio. Mety amin'ny karazana hoditra rehetra izy io. Safidy iray hafa dia Sesmaderma Hidraderm Facial natao manokana ho an'ny hoditra marefo sy maina. Azo ampiasaina na andro na alina. Azo ampiasaina amin'ny faritra vozony sy décolleté koa izy io. Mba hiarovana ny hoditra amin'ny masoandro dia azo atao ohatra ny mampiasa Collistar Sun Protection miaraka amina fampiasa roa: miaro ary avy eo manafaingana ny fizotry ny fanaovana hoditra. Ny fitandremana ny tenanao amin'ny masoandro dia hisorohana ny hoditrao tsy hihantitra aloha loatra. Asio 30 minitra alohan'ny fiposahan'ny masoandro.
Ny vanim-potoana fahavaratra dia mahatonga ny fampiasana makiazy vaovao kokoa miaraka amina endrika tsy dia mavesatra loatra. Noho izany ny menaka izay manome loko iray dia lasa safidy tsara. Ny menaka BB dia mahavita manome an'io vokatra io. Lancaster Sun Cream Sensitive Fresh BB manarona ny tsy fahalavorariana, manampy loko ary manome fiarovana amin'ny taratra UV.
Ny primer makiazy amin'ny fahavaratra dia tokony ovaina maizina kokoa, ohatra ny tonony fasika NYX Professional Makeup High Glass. Ity primer ity dia manamboatra ny hoditra amin'ny makiazy ary mahavita endrika mihombo. Avy eo mba hanamorana ny fizotran'ny makiazy azonao atao Max Factor Panstik fototra sy fanafenana. Ny endrika miendrika bara dia mahatonga azy ho mora miparitaka amin'ny hoditra, ary manolotra fahafaha-manarona avo handrakofana ireo kileman-kilema rehetra. Tsy mety diso ianao vovo-dronono ohatra ny an'ny Rimmel Natural Bronzer izay manome alokaloka maro ary mahatohitra rano. Mba hamaranana dia ampiasao fixative mba haharitra ny valiny. NYX Makeup Professional Makeup Setting Spray Matte miantoka ny fihazonana ny loko ary ny hoditra dia manohy manana vokany mifintina.
Amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra maniry fofona manitra na malefaka kokoa. Ohatra, ny La vie est belle dia mamorona ny fofony amin'ny voankazo sy voninkazo, mahatratra fofona mamy sy mahafinaritra. Aza adino ny manangona ny kitapo fidianao ary manohy mikarakara ny tenanao amin'ity fahavaratra ity. Ny fitazonana ny fahazarana hatsaran-tarehy amin'ny fahavaratra dia tena manandanja ihany koa. Ireo vokatra ireo dia hanampy anao ho tonga any.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Vokatra hatsaran-tarehy 8 ilaina amin'ity fahavaratra ity
Sheila benasayag dia hoy izy:
Hataoko ao an-tsaina ireo torohevitra ireo! Misaotra ny fizarana
Valiny tamin'i Sheila Benasayag
Fomba entina manangona entana amin'ny dia ataon'ny orinasa
Yoga famerenana amin'ny laoniny